Erdogan Oo Mixiis Ka Ahaa Arooska Ciyaar Yahan Caan Ah |
Erdogan Oo Mixiis Ka Ahaa Arooska Ciyaar Yahan Caan Ah
Madaxweynaha Turkiga, Racep Tayyip Erdogan, ayaa mixiis ka ahaa arooska ciyaaryahanka kubadda cagta ee Jarmalka ah Mesut Ozil oo Jimcihii dhacay.
Ozil oo isirkiisu yahay Turki ayaa tartankii Koobka Adduunka ee kal hore ka hor mar uu baahiyey sawirro uu la galahay Erdogan waxa ka dhashay cadho xamaasad leh.
Ka dibna waxa uu iska casilay xulka qaranka isaga oo ku sababeeyey “cunsurinimo iyo ixtiraam darro” lagula kacay markii sawiradaa lagu baahiyey Jarmalka.
Mesut oo haatan 30 jir ah ayaa xafladda arooska uu kula aqal galay gabadhii u doonanayd oo mar noqotay haweenayda ku guulaystatay quruxda Turkiga oo la yidhaa Amine Gulse, waxa uu ka dhacay hudheel kuwa raaxada ah oo ku yaal xeelliga marin biyoodka Bosphorus oo ah gacan kala qaybiya qaaradaha Yurub iyo Aasiya.
Lamaanahani waxay markii ugu horraysay is barteen sannadkii 2017-kii waxaanay bishii Juun ee 2018-kii shaaciyeen in ay isguursanayaan.
Ozil ayaa bishii Maarij ee sannadkan waxa uu shaaciyey inuu Erdogan ka codsaday inuu mixiis u noqdo, taas oo mar labaad dalkiisa Jarmalka lagaga dhaleeceeyey.
Helge Braun oo ah agaasimaha xafiiska ra’isal wasaare Angela Merkel ayaa isla markaa waxay wargeyska Bild u sheegtay in “qof kastaa dhibsaday” in Ozil go’aan noocaas ah gaadho, weliba marka la eego sidii looga falceliyey kulankii uu sannadkii hore la yeeshay madaxweynaha Turkiga.
Erdogan ayaa sidoo kale la sheegaa in had iyo goor uu ka qayb galo asroosyada shakhsiyaadka caanka ah ee Turkiga ka dhaca, gaar ahaan marka ololaha doorashooyinku socdaan.
Ka qayb galkiisa arooska Ozil wuxu ku soo beegmay ka hor doorashada ku celiska ah ee duqa magaalada Istanbul. Natiijadii markii hore soo baxday ayaa musharaxii xisbigiisa AKP codad aan badnayn lagaga guulaystay, hase yeeshee waa la buriyey waxaanay taasi dhalisay dhaleecayn dunida kaga timaad.
Kal hore maxaa dhacay?
Ozil oo ah jiilkii saddexaad ee dad Turki ah oo Jarmal noqday waxa uu ku dhashay magaalada Gelsenkirchen, waxaanu xubin ka noqday xulkii qaranka ee qaaday Koobkii Adduunka sannadkii 2014-kii.
Waxa abaal marino la siiyey 92 goor taageerayaasha kubadda cagtuna waxay laga soo bilaabo sannadkii 2011-kii shan sannadood oo isku xiga ugu codeeyeen inuu yahay ciyaartoyga ugu fiican xulka qaranka.
Laakiin bishii May ee sannadkii hore ayaa Ozil wuxu muran badan ka dhaliyey dalkaa markii uu baahiyey sawirro uu la galay hogaamiyaha Turkiga tartankii Koobka Adduunka ee 2018 ee Ruushku marti geliyey ka hor, waxaanay arintaasi dhalisay in dadka Jarmalka qaarkood is weydiiyaan labda dal ka uu daacadda u yahay.
Waxay dhaliishii la saarayey ka sii dartay markii xulkii Jarmalka oo ahaa kooxdii koobka haysatay wareegii koobaad ba lagu reebay.
Guul darradaa foosha xun ee xulku la soo hoyday ka dib, ayaa Ozil waxa uu internet-ka ku baahiyey qoraal dheer oo uu ku shaaciyey inuu iska casilay xulka qaranka.
Wuxu sheegay in loo soo diray fariimo nacayb miidhan ah iyo hanjabaado oo isaga loo aanaynayo guul darradada niyad jabka ah ee Jarmalku kala kumay tartankii Koobka Adduunka ee Ruushku marti geliyey xagaagii hore.
“Marka aynu guulaysanno Jarmal baan ahay laakiin waxaan noqdaa soo galooti marka la innaga badiyo” ayuu Ozil ku yidhi qoraalkaa, waxaanu intaa ku daray in inkasta oo uu guulo taariikhda galay la soo hooyey xulka qaranka hadana loola dhaqmay si dareensiisey in “aanu dib dambe u gashan garanka xulka qaranka Jarmalka.”